कोभिडका कारण मदिरा व्यावसायि समेत तनावमा
> कोभिडका कारण मदिरा व्यावसायि समेत तनावमा
२५ श्रावण २०७७, आईतवार १८:१६
भैरहवा, २५ साउन । कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण अर्थतन्त्र नाजुक अवस्था बन्दै गर्दा पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा त सबैभन्दा बढीनै पंभाव परेकाे छ । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मात्रै २० लाख भन्दा बढीको रोजागरी गुम्ने समेत देखिएको छ । पर्यटनसँग आवद्ध संघसंस्थाका अनुसार यो क्षेत्र आबद्ध करिब ११ लाख श्रमिकको रोजगारी गुम्न सक्ने छ । त्यसै गरी यातयात क्षेत्रआवद्ध करिव १० लाख श्रमिक पनि रोजगारबाट विमुख हुन सक्नेछन् । साढे १२ लाखलाई रोजगारी दिएको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि बहुसंख्यकमात्रामा रोजगारी गुम्न सक्ने उद्योगीले बताएका छन् ।
यस्तै अरु ब्यबसायको साथमा मदिरा ब्यबसाय पनि कोभिड १९ को कारणले धरापमा नै परेका छ । मदिरा व्यावसायी संघ रुपन्देहीमा आबद्ध एक मदिरा ब्यावसायी किशोर पन्थी भैरहवामा मदिरा ब्यबसाय गरेका छन् । उनले हामीसंगकाे कुराकानीमा खुलेर प्रतिक्रिया दिएका छन ।
प्रस्तुत छ मदिरा ब्याबसायी पन्थीसंग गरेको केही कुराकानी
“म लामो समय देखि यसै क्षेत्रमा काम गरेकाे छु । विभिन्न कम्पनी हरुको अनुभव लिएर मदिरा ब्यबसाय प्रती केही जानकारी भएको हुँदा यहि ब्यबसाय गर्न मन लागेकाे हाे । अन्य जस्तै यो व्यवसाय पनि कोरोना महामारीको कारणले धरापमा परेको छ। कतिपय व्यवसायिहरु त ब्यबसायनै छोडीसक्नु भएको छ। हामी मदिरा व्यवसायिहरु ९०% ले बैंक ऋृण बाटनै संचालन गर्दै आइरहेका छौ । बैंक ब्याज घर भाडा बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। लामो समय लकडाउन हुँदा सबै ब्यापार ठप्प भयो । अहिले पसल खोल्न केहि सहज भएता पनि ब्यापार नहुँदा अति नै मर्का मा परेका छौं।”
अन्य समस्याहरु केहि छन कि ?
बजारमा मानव स्वास्थमा प्रत्यक्ष असर गर्ने खालका गुणस्तरहिन लोकल मदिराको खरिद बिक्रि भैरहेको छ । त्यस्ता गुणस्तरहिन मदिरा सेवनबाट कैयन ब्यक्तीहरुको ज्यान समेत गएको छ । त्यस्तो मदिरा खरिद बिक्रीले जनतासंगैं राज्य लाई समेत नराम्रो असर हुने हुँदा यस्तो खालको मदिरा पनि समस्या को विषय बनेको छ।”
तपाईहरुको मदिरा व्यवसायी संघ पनि त छ ? संघ ले के गरुरहेको छ ?
राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो । हो म मदिरा व्यावसायि संघ मा आबद्ध छु र हाम्रो अध्यक्ष श्री सम्भु प्रसाद भट्टराईज्युको नेतृत्वमा तमाम विषयहरुलाई लिएर जिल्ला प्रसासन कार्यलय जिल्ला प्रहरी कार्यलय लगायत धेरै ठाउँमा लिखित र मौखिक हिसाब ले समस्याहरु अबगत गरायौं । तर राज्य नै अन्धो र बहिरो भए पछि कस्को के नै लाग्छ र?
व्यवसायि संघ रुपन्देही ले जिल्ला भरी छरिएर ब्यबसाय गर्ने व्यवसायिहरु लाई एकीकृत गर्ने, व्यवसायिहरुका समस्या हरु सुन्ने र हतोत्साहित नहोउन भन्ने उदेश्यले समाधान को कोशिस गर्ने, विभिन्न सामाजिक कार्यहरु जस्तै ब्लड डोनेसन, गरिब तथा बिपन्न परिबार लाई राहत बितरण ,अध्ययन अबलोकन भ्रमण, तथा पारिबारिक बन भोज कार्यक्रम लगायत अन्य सामाजिक कार्यक्रम हरु पनि सन्चालन गर्दै आएको छ।
उनि थप्छन् “हामी मदिरा व्यवसायिहरु राज्यलाई धेरै कर तिर्ने मध्येका व्यावसायी हौं । यस कारणले पनि हामी व्यवसायिहरुका समस्याहरु राज्य ले सुनेर कार्यान्वयन गरोस र हाम्रा ब्यबसायहरु सहज रुपमा संचालन गर्ने बाताबरण निर्माण गरोस भन्न चाहन्छु।”